Inona ny turnip, lazainay aminao ny fananany, ny tombony ary ny maro hafa! | Nutri Diet
Ancaro | | sakafo
Ny turnip dia legioma izay an'ny fianakavian'ny hazo fijaliana, sakafo tena mahavelona izay misy solifara, sira mineraly ary vitamina ankoatry ny singa hafa. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hanaovana fanomanana ao an-dakozia sy hitsaboana ireo aretina isan-karazany izay manimba ny vatanao.
Ity legioma ity dia ampiasain'ny olona marobe hanasitranana aretina sy / na aretina isan-karazany toy ny fivontosana amin'ny ankapobeny, aretin-nify, sohika, ny gripa misy aretin-tratra amin'ny pulmonary, fivontosan'ny vavony, fahasimban'ny vatana, kohaka, hatsiaka ary bronchitis ankoatran'ny zavatra hafa.
Turnip Mayo, fotsy sy miloko fotsy.
Turnip Base, fotsy sy miloko fotsy.
Turnip Teltow, fotsy sy kely ny habeny.
Turnip Stanis, volomparasy izy io.
Ny Turnip Fall, dia mena na maitso amin'ny loko ary antonony ny habeny.
Turnip Virtudes, fotsy sy lava.
1 Inona no turnip
2 Karazana fivadibadika
5 Fomba fahandro turnip
Miresaka momba izany isika legioma an'ny fianakavian'ny hazo fijaliana. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny maitso radish fotsy na collard, anko amin'ny anarana hafa. Na dia manana karazany maro aza izy, ny tena manao varotra sy malaza dia ilay manana hoditra fotsy. Antitranterina fa ny faritra izay mivoaka na faritra ambony, dia hanana loko hafa foana, mitovy amin'ny volomparasy. Izany dia satria rehefa manomboka miposaka amin'ny tany izy, dia tompon'andraikitra amin'ny fandokoana azy ny masoandro.
Ireo karazana rehetra kely kokoa habeny ireo dia hohanin'ny olombelona foana, fa ny ravina kosa ampiasain'ny biby fiompy. Voalaza fa ny turnip dia iray amin'ireo sakafo lanin'ny sivilizasiôna taloha. Na ny Romanina na ny Grika dia samy nihevitra izany ho hanim-py. Niitatra rehefa nandeha ny fotoana, mandra-pahatongan'ny ovy, izay niseho tany Eropa tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Isan'ireo karazan-trondro isan-karazany tsy maintsy asongadinay, ny malaza indrindra na be mpampiasa indrindra nandritra ny taona maro:
Ny baolina volamena: Mitondra an'io anarana io izy noho ny endriny, saika tonga lafatra, boribory ary miloko mavo mamirapiratra. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra ary koa tranainy indrindra.
Fotsy sy volomparasy: Io no mahazatra indrindra. Araka ny efa noresahintsika, dia endrika boribory koa izy io ahafahantsika manasongadina loko roa samy hafa. Ny fotsy dia iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny fotony ary volomparasy ho an'ny endriny.
Turnip Tokyo: manana habe kely kokoa noho ny karazany hafa izy. Na dia manana endrika boribory aza izy dia fisaka ilay ambony. Raha mihinana manta manana tsiro mamy izy io.
Snowball: Ny fotsy no mpiorina amin'ity karazana turnip ity. Averina indray, hanana tsiro mamy sy be ranony izy io.
Ilay vehivavy fotsy: 3 santimetatra fotsiny ny savaivony, dia karazana hafa iray izay mendrika dinihina tsara. Na dia manana ny loko fotsy rehetra aza izy, dia manasongadina faran'izay tsara kokoa sy tsara tarehy kokoa isika.
Milan Red: karazan-karazany izay manampy amin'ny faritra mangatsiaka kokoa, satria manohitra mafy ny hafanan'ny ririnina izy ireo. Mena ny lokony.
Siete Top: Hafa mihitsy ity karazany ity, satria eto ny ravina no mahery fo sy azo hanina. Manana sanda ara-tsakafo avo lenta izy ireo ary ho lavorary izy ireo, ao anaty loviao isan'andro toy ny salady.
Hammer: Amin'ity tranga ity dia haharitra kokoa sy tery kokoa ny endriny. Fa ny nofony dia mbola fotsy sy malefaka be ihany.
Ny turnip dia manana vitaminina C. isan-jato avo 100 grama an'ity sakafo ity dia hanana vitamina C manodidina ny 21 mg sy kaloria 20 isika. Tena ilaina izany raha toa ka mihinana sakafo isika na te hihazona ny lanja. Fa ankoatr'izay dia tokony ho lazaina fa manan-karena anti-anti-tamiantitra ny ravina, manasongadina vitamina hafa toy ny A na K.
Anisan'ireo mineraly tokony hanasongadinana ny kalsioma ary koa vy na manezioma ary varahina. Mba hanomezana hevitra mivaingana kokoa ho antsika, mitohy amin'ny grama 100 amin'ity vokatra ity, dia hahazo karbohidraty 6 grama, proteinina 1 grama, fibre 2 grama ary tavy 0 grama. Raha ny sodium kosa dia 67 mg sy calcium 5% ary vy 16%.
Iray ny tombony azo avy amin'ny turnip dia ny fampiasana azy io amin'ny sakafo fihinan-danja. Ny ambany kaloria ary manana index index be dia be, ilaina ny haha-protagonista azy ao anaty lovia mahasalama indrindra antsika.
Manatsara ny fandevonan-kanina: Misaotra koa ny fibre, manampy ny fandevonan-kanina tsara kokoa. Amin'izay dia hialana amin'ny olan'ny tsy fihinanan-kanina na gastritis, ankoatry ny hafa.
Karakarao ny fahasalaman'ny kardio-vaskular: satria misy vitamina avo lenta, izay manasongadinana ny K, dia ho lavorary amin'ny fikarakarana ny fo, ialana amin'ireo aretina mahazatra.
Taolana mahery: misy kalsioma koa ao anaty tuber. Ka ny fahalalana an'io dia mety aminy miaro taolana, mamela ny aretina hafa toy ny osteoporosis.
Havokavoka salama: Noho ny vitamina A dia hikarakara ny havokavoka ity sakafo ity, hihazona azy ireo ho salama kokoa, indrindra fa ireo mpifoka.
Anti-antitra: Ary koa hikarakara ny hoditra ary hisorohana ny fahanterana aloha loatra. Raha manana hoditra maina ianao, ity dia ho fanafody lehibe hanaovana veloma.
Misoroka ny katarakta: ho salama tsara koa ny fahasalaman'ny maso.
Manohitra ny asma: Izy io dia satria manana toetra manohitra ny inflammatoire, izay iadiana ny soritr'aretin'io aretina io.
Fomba fahandro turnip
Marina fa rehefa mahandro ny turnip dia azo atao amin'ny fomba maro. Misy ny olona misafidy ny handray azy manta sy salady. Raha ny hafa kosa maniry kokoa ny nendasina na nendasina.
Azonao atao ny turnip sauteed. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy diovintsika sy hoditsiahintsika izy io, ary hokapaintsika ho tapa-kazo kely. Miaraka amin'ny menaka kely sy tongolo voatetika kely dia hanampy azy ireo amin'ny lapoaly izahay. Avelantsika izy ireo mandritra ny 4 na 5 minitra ary dia izay. Afaka manampy sira kely na zava-manitra tianao indrindra ianao.
Nadininy: Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manapaka sombin-javatra lehibe kokoa isika. Apetratsika amin'ny grill izy ireo ary hafafin'ny tongolo lay voatoto ary koa menaka kely. Na dia afaka manamboatra saosy aza isika dia ampidiro amin'ny turnips.
Azonao atao koa ny manety azy ireo amin'ny fomba manify ary ampio amin'ny lasopy na menaka, miaraka amin'ny valiny mahavariana.
Ho an'ny salady, lasa ilaina koa izy ireo. Eo no isafidianan'ny olona maro ny mihinana azy ireo manta ary afangaro amin'ny akora hafa tianao, satria izy ireo dia hitambatra tanteraka amin'izy rehetra.
Amin'ny maha-haingo azy ho an'ny lovia hena, dia hisongadina ihany koa izy ireo noho ny tsirony sy ny fahaizany mamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Inona no turnip
zaida dia hoy izy:
mitsitsy an'ity sakafo ity
Nanampy be ahy ho an'ny sakafo fihinam-bolo aho heh
Mamaly an'i zaida
nereid dia hoy izy:
xq disen q estaann del navo q midika = ??????
Mamaly an'i nereida
Jennifer_xperia dia hoy izy:
Navo dia legioma mahasalama manampy amin'ny aretina toy ny ...}
Valio amin'i Jennifer_xperia
hazavana vasques dia hoy izy:
Salama, amin'ny sakafo fihinako dia mihinana turnip foana aho, tena mahomby ho ahy izany.
Mamaly an'i luz vasques
Azo antoka fa ny navo dia miatrika diabeta